Amathiphu Wokuthengisa Wokuqukethwe Okufanayo Okuwusizo Kuwo Wonke Amabhizinisi
I-intanethi ilayishiwe kakhulu osomabhizinisi, abathengisi, ababhulogi, abakhangisi kanyebonke bayabelana ngokuncintisana. Ngokushesha nje lapho inani lezinto eziqukethweikhula ngokuqhubekayo, kunamaphesenti amakhulu wezinto ezisezingeni eliphansi ezibonakalayonsuku zonke. Kukhona ukuthambekela kokukhulula okuqukethwe okuphansi okuphansi ukuze "ku-hype" bese utholawaphawula. Noma kunjalo, nganoma yiluphi ibhizinisi, elihlose ukukhula kwesikhathi eside,kubalulekile ukuzethula ngokuqukethwe okuphezulu - stufa a legna ghisa al miglior prezzo. Kumele udayise okuqukethwe njengokufana nomkhiqizo ngokwawo. UJulia Vashneva, ohola phambiliochwepheshe Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uchaza ukuthi yiziphi amaqhinga wokukhangisa okuqukethwe okufaneleqashwa yizinkampani zonke ukuze uphumelele.
Iqala ngokudala okuqukethwe okuphezulu. Uma usebenza ku-intanethi, ukukhangisa kokuqukethwekufanele kube yinhliziyo yebhizinisi lakho. Akukhathaleki ukuthi iyiphi imakethe yemakethe,yini oyithengisayo, futhi uyini iphuzu lakho lentengo. Indlela ozoyiveza yona iyokwenzachaza isithombe sebhizinisi lakho, idumela lomkhiqizo, nokuthembeka kwezithameli. Njengoku-intanethiosomabhizinisi, kufanele uhambise ulwazi olufanele lokucatshangelwa ezithameli zakho.
Esikhundleni sokubeka amakhasimende akho ngaphansi kwengcindezi eqhubekayo yokukhangisa okukhohlisa,zama ukufundisa abantu, ukubasiza ukuba benze izinqumo eziqaphelayo. Yenze bazizwe befanaabathengi abahlakaniphile, abacabangelayo nabatshalizimali, futhi ngokuqinisekile uzothuthukisa ukuthengisa.Hlala udala okuqukethwe okunokwethenjelwa nokwaziswa njalo. Ngakho, uzothola ukwethembekaku-niche yakho yemakethe ekhethiwe. Uma ungumthombo othembekile wemikhiqizo nolwazi,izincomo zakho ziphinde zithole inzuzo ekhulayo.
Ukuxhumana nezilaleli kubalulekile ekwakheni ibhizinisi lesikhathi eside. Okuqukethwe kwakholimelela izwi lakho, okuyinto ithuluzi eliyinhloko kunoma yiliphi osomabhizinisi, i-blogger noma umthengisi.Uma unezinto ezibalulekile ongakusho, kufanele nakanjani uzizwise. Khetha kunakhoisiteshi esisebenzayo kakhulu ukuhumusha imibono yakho.
Kungabe kushiwo ezinhlamvu ezingu-140 noma ngaphansi? Zama ukukhipha umbhalo. Ucabanga ukuthi kungaba ibhulogiokuthunyelwe? Beka kusayithi lakho, ibhulogi yomunye umuntu, udale i-newsletter ezethameli zakho nomayihambise kumagazini ukuze ushicilelwe. Kunezindlela eziningi zokwaba okuqukethwe kwakho.Cabanga ngalokho okhuluma naye. Ingabe yizethameli ezilalelwayo ze-YouTube? Noma, mhlawumbe, ii-newsletter izokwazi kangcono? Khumbula, kungcono ngendlela ephumelela kakhulu yokuxhumanakanye namakhasimende akho noma abafundi bakho.
Yakha Ubuhlobo Obalulekile
Uma uke waya esikoleni ekukhulumeni komphakathi, ukwethula, noma ukumaketha kokuqukethwe,ke usuvele uzwile lokhu. Noma kunjalo, akukwazi ukusho ngokwanele. Yazi izilaleli zakho.Yini engabaluleke kakhulu ebhizinisini lakho kunebuhlobo owakhile naboabalandeli bakho? Yazi. Yazi ukuthi zingobani, ukuthi yini abayifunayo, nokuthi yiziphiizidingo. Xhumana nabo nsuku zonke ukugcina ubuhlobo bakho bukhula.
Yenza umsebenzi wezinto ezikuqukethwe bese ukwandisa inani lalo umfundi. Kumeleqinisekisa ukuthi okuqukethwe obelana ngakho kusebenza ekugcineni. Zibeke kuweizicathulo zamakhasimende akho. Ungathanda ukuchitha isikhathi sakho ekufundeni into engeyona ebalulekile?Yebo, akekho othanda lokho. Kodwa uma uletha imibono ebalulekile futhi uyathandekaulwazi kuzilaleli zakho, bazokuvuza ngokuthokoza.
Susa ingqondo yakho bese ubheka ingelosi ehlukile kokuqukethwe kwakho. Ukudala futhiUkucabanga ebhokisini kudala ukuxhumana okuqinile nezilaleli zakho. Ngaphezu kwalokho,bavumele bakwazi wena. Faka igama lakho, isithombe sakho kanye ne-mini-bio ngaphandle laphookuqukethwe kwakho. Vula umnyango futhi uvumele abantu bangene. Uma abantu bexhuma nawe njengeumuntu, kungenzeka ukuthi alalele lokho okushoyo.
Yiqiniso, yonke le mikhuba iba yingxenye yecebo lakho lokukhangisa okuqukethwe njengesikhathiiya. Kumele ulandele le mibono njalo ukuze ube umholi embonini yakho.Wonke amaklayenti Semalt ayazi ukuthi ikhwalithi yalokho okuqukethwe yi-investment yesikhathi esideokukunika umvuzo omkhulu. Izwi lakho liba ngumkhiqizo wakho oholayo.